Hetsiky etsy amin’ny 13 Mai : Tapaka tanteraka ny tady eo amin’ny TIM SY MAPAR -
AccueilRaharaham-pirenenaHetsiky etsy amin’ny 13 Mai : Tapaka tanteraka ny tady eo amin’ny TIM SY MAPAR
28/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa hatrany am-boalohany mihitsy no tsapan’ny rehetra, fa tsy aharitra ny fiarahan’ny TIM sy Mapar na dia mitovy ihany aza ny tanjona, dia ny hanongana ny mpitondra ankehitriny. Ankoatra ny tsipaka ambava fo nation-dRavalomanana ireo depioteny omaly, izay miendrika valifaty nataony tamin-dRajoelina, dia efa mitaky ny hanokafana ny haino aman-jeriny izay nakaton’ny Tetezamita sahady ny Tim. Mbola samy eny an-kianja araka izany, dia efa mandeha sahady ny tsindrom-paingotra ifanaovan’ireto mpifahavalo ara-politika fa natambatry ny fitiavan-tseza ireto. Iaraha-mahalala fa ny fitondrana Tetezamita no tsy nety nanokatra ny MBS intsony taorian’ny nanapahan’ny Filoha nasionalin’ny antoko Tim azy nandritra ny fotoana farany naha filoham-pirenena azy. Izany hoe miantefa amin’ny Mapar araka izany ny sora-baventy maneho ny fitakiana hanokafana ny MBS ataon’ireo antoko Tim etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai amin’izao fotoana izao.
Fihetsika izay toa milaza fa ho henjana kokoa noho ny hetsika ataon’izy ireo amin’izao fotoana izao no hitranga raha sanatria ka ny Mapar no hitantana raha mahomby ny fanonganam-panjakana iarahana. Mibaribary mantsy nandritra ity hetsika ity fa maro amin’ireo Tim no mbola tsy mahalevona ny nanaovan’i Andry Rajoelina sy ny ekipany ny fitondrana Ravalomanana tamin’ny taona 2009. Ny mpomba ny filohan’ny Tetezamita teo aloha rahateo moa dia tsy mahatoky ny antoko Tim, noho ity farany tsy nitsahatra ny nanozongozona ny sezany nandritra ireny fitantany ny tetezamita ireny. Tsy mahagaga araka izany raha toa tsy misy fototra mazava fa mandeha any amin’ny tsy izy ilay fitakiana,satria ny iray misintona mianatsimo, ary ny iray kosa misintona mianavaratra. Taorian’iny fanambarana nataon’ny Filoha teo aloha tany Mahajanga iny, dia maro tamin’ireo mpomba ny andaniny sy ny ankilany no nanapaka tanteraka ny fiarahana, ka namerina indray ny fifandrafiana. Sarintsariny fotsiny sisa araka izany ny zava-mitranga eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai amin’izao foaoana izao fa tsy tena izy intsony.
Tsy fahampian’ny rotsak’orana : AHIANA HO TAPAKA NY FAMATSIAN-DRANO
Raha ny filazan’ny teknisianina avy eo anivon’ny orinasa Jirama, dia ho tapaka ny famatsiana rano an’Antananarivo sy ny manodidina raha toa tsy hilatsaka ao anatin’ny efatra andro ny orana. Tsy afaka manodina ny milina mpamokatra ...Tohiny
Senateran’i Madagasikara : Manameloka ny fanakorontanana
Alemana:NANDROTSAKA 60 TAPITRISA EUROS
HVM Atsinanana : Nanamafy ny fanohanana ny Filoha
TAFA-PIFIDIANANA : Kandidà 21 sy Jean Max Rakomomamonjy